Iindaba -I-Tianjin Cheng Yang yeeMveliso eziShushu zeSilicon Camera fiberglass amalaphu
I-Tianjin Cheng Yang Iimveliso eziShushu zeSilicon Camera fiberglass amalaphu
Ilaphu leSilicone ikwabizwa ngokuba yi-silica gel, i-silica gel emva kobushushu obuphezulu obushushu obenziwe nge-acid kunye ne-alkali ukumelana, ukumelana ne-abrasion, ukumelana nokushisa okuphezulu kunye nokuphantsi, ukumelana nokudlala kwendima luhlobo lwesicelo kwizityalo zamachiza, iindawo zokucoca ioyile, izibuko kunye nezothutho, ezemoto, ezamayeza, ezamanzi ashushu zeshishini kunye ne-steam diving silicone ityhubhu, ukutya, kunye namanye amashishini, ngakumbi uhlobo lomgangatho ophezulu werabha yesilic njengempahla ekrwada ukumelana noxinzelelo oluphezulu lwetyhubhu yombane yentsimbi yombane.
I-multilayer ephezulu yoxinzelelo lwe-silica gel ityhubhu yenziwe ngolwahlulo lwerabha lwangaphakathi, ifayibha yokuqinisa ukomeleza umaleko kunye nolwaleko lwerabha lwangaphandle. Umaleko werabha wangaphakathi ngumaleko wangaphakathi, kwaye umaleko werabha wangaphandle usongelwe ngumaleko wefayibha wokuqinisa ukomeleza.
Umbhobho werabha owenziwe ngelaphu ngejeli ye-silica unezibonelelo zokuphila ixesha elide kunye noxinzelelo olukhulu. Iyakwazi ukumelana noxinzelelo lwe-1MPa-10MPa, ephindaphindwe amaxesha angama-3-5 kunombhobho oqhelekileyo woxinzelelo lweerabha. Inezibonelelo ezibonakalayo kukhuseleko lokusingqongileyo.
Ilaphu le-silica gel lenziwe ngelaphu leglasi yefayibha njengelaphu elisezantsi ngokutyabeka okanye ukukhahlela. Yenziwe ngobushushu obuphezulu obunganyangekiyo, obuchasayo kunye namandla eglasi yefayibha yelaphu nge-organic abicah irabile calendering okanye ukumitha. Yimveliso yezinto ezidityanisiweyo ezintsha ezinokusebenza okuphezulu kunye nokusetyenziswa okuninzi.
1. Ukufakwa kombane: Ilaphu leSilicone linebanga eliphezulu lokufakelwa kombane, linokumelana nomthwalo wevolthi ephezulu, lingenziwa kwilaphu lokugquma, umkhono kunye nezinye iimveliso.
2. Isinxibo esingeyentsimbi, ilaphu lesilic esetyenziswa njengesixhobo esiqhagamshelekayo sepayipi, irabha eboshwe ngombala weglasi ifayibha yokwakheka kwezinto njengezinto ezisisiseko zokudityaniswa ngokudibeneyo. Ingasombulula ubushushu bokubanda okubandayo ekutshatyalalisweni kombhobho, ilaphu le-silicone elinokuxhathisa kakhulu kubushushu obuphezulu, i-anticorrosion, ukumelana nokuguga, ukutyeba okuhle kunye nokuguquguquka, inokusetyenziswa kakhulu kwi-petroleum, imichiza, isamente, amandla kunye neminye imimandla.
3. I-Anticorrosion: Ilaphu elenziwe ngerabha eligutyungelweyo linokusetyenziswa njengolwelwesi lwangaphakathi kunye nolwangaphandle lweepayipi, ngokusebenza kakuhle kwe-anticorrosion kunye namandla aphezulu. Yinto efanelekileyo yokulwa nokubola.
4. Amanye amasimi: izixhobo zecrafti zeglasi ezenziwe ngerabha ezingasetyenziswa ekwakheni izixhobo zokutywina, ubushushu obuphezulu bebhanti yokuhambisa izinto, izinto zokupakisha kunye neminye imimandla.
Ilaphu le-silica gel likwahlulwe laba lilaphu le-silica elinamacala amabini kunye nelaphu le-silica elinamacala amabini, ukongeza, kukho ubushushu obuphezulu obuphilisa ilaphu le-silica kunye nobushushu begumbi obunyanga ilaphu le-silica.
Umbala oqhelekileyo welaphu le-gel ye-silica i-vermilion, i-grey eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama, emhlophe kunye neminye imibala nayo inokwenziwa ngokwezifiso.
Ingubo yeFiberglass, Ingubo ye-Acrylic Fiberglass, Indwangu yeFiliclass Camera, Ingubo yeAlglised fiberglass, Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu, Acrylic Camera Fibreglass,